बुद्धबारे भ्रम « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
« The Birtplace of Gautam Buddha is Nepal, not India
Posted by worldamity on March 27, 2010
By प्रा.डा. दयानन्द बज्राचार्य
भारतीय मूलका अमेरिकी पत्रकार फरिद जकारियाको पुस्तक ‘पोस्ट अमेरिकन वल्र्ड’मा बुद्धको जन्म र बौद्धधर्मको उत्पत्ति भारतमा भएको उल्लेख गरेकोमा केही समयअघि दिनानाथ शर्माले आपत्ति जनाएका थिए । जकारियाले गलत नियतले जानी-जानी आफ्नो पुस्तकमार्फत विश्वलाई बुद्धको जन्मस्थल भारत भएको झूटो सन्देश दिनखोजेका शर्माको निष्कर्ष थियो । हुन पनि जकारियाजस्ता बौद्धिक व्यक्तिलाई बुद्धको वास्तविक जन्मस्थल नेपाल हो भन्ने सामान्य ज्ञान नभएको विश्वास गर्न गाह्रो छ । आफ्नो विदेश भ्रमणका क्रममा मैले पनि पश्चिमी मुलुकमात्र नभएर द. कोरिया, जापान, चीन, भियतनाम, थाइल्यान्डजस्ता ठूलो संख्यामा बौद्धधर्म अनुयायी भएका देशमा समेत धेरै शिक्षित व्यक्तिलाई बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो र उक्त भूभाग नेपालमा पर्छ भन्ने ज्ञान नभएको पाएको छु ।
केही वर्षअघि दक्षिण कोरियामा आयोजित एक वैज्ञानिक सम्मेलनमा भाग लिएको थिएँ । सम्मेलनपछि विदेशी पाहुनालाई सम्मेलनका आयोजकद्वारा कोरियाका विभिन्न सहर अनि राजधानी सोलबाट केही टाढा रमणीय पहाडमा अवस्थित एक बौद्धस्थलको भ्रमण गराइएको थियो । पाहुनाहरू बोकेको टुरिस्ट बसमा एक पेसावर महिला टुरिस्ट गाइड पनि थिइन् । उनले बौद्धस्थलबारे जानकारी दिँदै बुद्धको जीवनीबारे चर्चा गर्न थालिन् । यसैक्रममा उनले बुद्ध भारतमा जन्मिएको बताइन् । उनले सायद यस्तो गलत सन्देश धेरै वर्षदेखि विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकलाई दिँदै आएकी थिइन् । एक पेसावर टुरिस्ट गाइडलाई समेत बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो भन्ने ज्ञान नभएको थाहा पाउँदा निकै अचम्म लागेको थियो । मैले आफू नेपालबाट आएको परिचय दिँदै बसभित्रै उनलाई बुद्ध जन्मेको देश भारत होइन, नेपाल हो भनी सच्याउन खोज्दा उनी अकमक्क परेकी थिइन् । ती कोरियाली महिलालाई वास्तवमै बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने थाहा रहेनछ । उनले विद्यार्थी छँदा बुद्धको जन्म र बौद्धधर्मको उत्पत्तिस्थल भारत भनेर पढेकी रहिछन् । बुद्धको जन्मस्थल र नेपालबारे थप अध्ययन गर्न मैले उनलाई आग्रह गरेको थिएँ । उनीमात्र होइन, बसमा यात्रा गरिरहेका सबैजसो विदशी पाहुनालाई पनि लुम्बिनीबारे र बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल हो भन्ने थाहा रहेनछ ।
बौद्धस्थल पुग्दा त्यहाँ कोरियाली एवं विदशी पर्यटकको ठूलो घुइँचो थियो । शैक्षिक भ्रमणमा आएका विद्यार्थीको पनि निकै ठूलो भीड थियो । मन्दिरभित्र ढंुगाबाट निर्माण गरिएको बुद्धको विशाल तथा आकर्षक मूर्ति थियो । उक्त मूर्ति धेरै वर्षअघि भारतबाट आएका मूर्तिकारले तयार पारेको रहेछ । सायद यस्तै कारणले होला, त्यहाँ विभिन्न समूहमा पर्यटकलाई बुद्धको जीवनीबारे जानकारी दिइरहेका अन्य टुरिस्ट गाइडले पनि बुद्ध भारतमा जन्मिएकोे र बौद्धधर्म भारतबाट आएको बताइरहेका थिए । त्यहाँका केही भिक्षुगणलाई सोध्दा उनीहरूलाई पनि बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएकोे भन्ने ज्ञान रहेनछ । कोरियामात्र होइन, जापान, चीन, थाइल्यान्ड र भियतनामजस्ता बहुसंख्यक बौद्धधर्म अनुयायी भएका मुलुकको बौद्धस्थलहरू भ्रमण गर्दा मैले यस्तै अनुभव गरेको थिएँ । यी देशका थुपै्र मानिसलाई बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सामान्य ज्ञान रहेनछ । उनीहरू वास्तवमै बुद्धको जन्म भारतमा भएको ठान्छन् । यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो ।
धेरै विदेशीलाई बुद्ध जन्मेको देश नेपाल नभएर भारत हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण एकातिर भारतका विभिन्न पक्षले विभिन्न माध्यमबाट बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने गलत सन्देश समय-समयमा विश्वलाई दिँदै आउनु हो । त्यस्तै यसमा नेपालको पनि कमजोरी छ । नेपालले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै बुद्धको जन्मभूमि भारत नभएर नेपाल हो भन्ने सही सन्देश विश्वभर प्रभावकारी ढंगले फैलाउनसकेको छैन ।
कुनै विदेशीले बुद्ध भारतमा जन्मिएकोे भन्दा हामी आक्रोशित हुन्छौं र त्यसको विरोध गर्छौं । केही वर्षअधि एउटा हिन्दी सिनेमामा बुद्ध भारतमा जन्मिएकोे भनेर देखाउँदा नेपालीहरू निकै आक्रोशित भएका थिए र सिने निर्माता एवं भारत विरुद्ध देशका विभिन्न भागमा जुलुस, हडताल र नाराबाजी भएका थिए । तर भावुकतावश गरिएका यस्ता आँधी-हुरीजस्ता प्रतिक्रिया क्षणिक हुन्छन् । हाम्रो आक्रोश पनि केही समयपछि शान्त हुन्छ, चियाको कपमा आएको आँधीजस्तो । अनि हामी सबै कुरा बिर्सिदिन्छौं । हामी बुद्ध जन्मिएकोे देशको नागरिक भनेर गर्वमात्र गर्छौं, तर बुद्धको जन्मस्थल भारत नभएर नेपाल हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलाउन कुनै समझदारीपूर्ण प्रयास गर्दैनौं । स्थानीय पत्रपत्रिकामा भारतको विरोध गरेरमात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बुद्धको जन्मभूमिबारे व्याप्त भ्रमलाई निर्मूल गर्न सकिन्न । यसका निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
कुनै विदेशीले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्दा हामी आक्रोशित हुन्छौं र त्यसको विरोध गर्छौं । केही वर्षअधि एउटा हिन्दी सिनेमामा बुद्ध भारतमा जन्मिएकोे भनेर देखाउँदा नेपालीहरू निकै आक्रोशित भएका थिए र सिने निर्माता एवं भारत विरुद्ध देशका विभिन्न भागमा जुलुस, हडताल र नाराबाजी भएका थिए । तर भावुकतावश गरिएका यस्ता आँधी-हुरीजस्ता प्रतिक्रिया क्षणिक हुन्छन् । हाम्रो आक्रोश पनि केही समयपछि शान्त हुन्छ, चियाको कपमा आएको आँधीजस्तो । अनि हामी सबै कुरा बिर्सिदिन्छौं । हामी बुद्ध जन्मिएकोे देशको नागरिक भनेर गर्वमात्र गर्छौं, तर बुद्धको जन्मस्थल भारत नभएर नेपाल हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलाउन कुनै समझदारीपूर्ण प्रयास गर्दैनौं । स्थानीय पत्रपत्रिकामा भारतको विरोध गरेरमात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बुद्धको जन्मभूमिबारे व्याप्त भ्रमलाई निर्मूल गर्न सकिन्न । यसका निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
This entry was posted on March 27, 2010 at 11:58 am	and is filed under लेख / रचना. Tagged: फरिद जकारिया, बुद्ध, बुद्धको जन्म र बौद्धधर्मको उत्पत्ति. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.